Saddex Cayaartoy Oo Ka Tirsan Manchester United Oo Zinedine Zidane Uu Dalbaday Waqtigiisii Real Madrid Iyo Sidii Wax U Dhaceen | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Saddex Cayaartoy Oo Ka Tirsan Manchester United Oo Zinedine Zidane Uu Dalbaday Waqtigiisii Real Madrid Iyo Sidii Wax U Dhaceen
(05-10-2018) Macalin Zinedine Zidane ayaa isku dayey inuu saddex ciyaartoy oo ka tirsan Manchester United uu geeyo Real Madrid xili ciyaareedkiisii ugu dambeeyey, kuwaas oo haddii uu heli lahaa ay suurtogal ahaan lahayd inuu lasii joogi lahaa wakhti dheer.
Zidane ayaa ka tegay Los Blancos laba maalmood kaddib markii uu u qaaday Koobkii saddexaad oo xidhiidh ah ee Champions League ah, waxaana ay qof walba ku noqotay lama filaan ka hor intii aanu go’aankaas oo kale qaadanin Cristiano Ronaldo oo Juventus uga wareegay.
Warbaahinta Manchester Everning News, ayaa waxay baahisay magacyada saddex ciyaartoy oo Manchester United oo Zidane uu raadinayey, waxaana kulan aan caadi ahayn oo uu la qaatay madaxweyne Florentino Perez uu kaga dalbaday in kooxdu ka shaqayso sidii lagu keeni lahaa Bernabeu saddexdaas laacib.
Saddexda ciyaartoy ayaa waxay kala yihiin Goolhaye David de Gea oo marar dhawr ah ku dhowaaday inuu ku biiro Real Madrid, Anthony Martial iyo Paul Pogba.
Manchester United oo la sheegay inay raadinayso Zidane si uu u beddelo Jose Mourinho oo aan cago-adag ku taagnayn, ayaa waxa uu warkani u noqonayaa mid wanaagsan maadaama uu hore u jeclaa saddexdan laacib.